JOWHAR: Magacyada laba xildhibaan oo ku dhaawacmay Qarax loo dhigay Jid ay marayeen - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. JOWHAR: Magacyada laba xildhibaan oo ku dhaawacmay Qarax loo dhigay Jid ay marayeen - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
JOWHAR: Magacyada laba xildhibaan oo ku dhaawacmay Qarax loo dhigay Jid ay marayeen
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa Qarax lagu dhaawacay laba xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Labadaan xildhibaan ayaa qaraxu haleelay xilli socod lug ah ku marayeen inta u dhaxeysa Xarunta Shirkadda biyaha ee Farjanno iyo saldhiga Booliska magaallada Jowhar, saqdii dhexe kadib, waxaana lagu qarxiyey Miino meel fog laga hagayey.
Xildhibaanada Qaraxa lala beegsaday ayey magacyadoodu kala yihiin: Maxamed Cabdi Cali (Maxamed Dheere) iyo Cabdiraxman Cabdi Iidow (Kheyre)waxaana dhaawacooda la geeyay isbitaalka magaalada
Xilliga qaraxu dhacay ayey xildhibaannada la beegsaday kasoo laabteen munaasabadii xalay loogu dabaal-degay sannad-guuradi shanaad ee kasoo wareegtay marki la dhisay maamul goboleedka Hirshabelle.
Alshabab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa lagu dhaawacay xildhibaannada ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Previous articleHaweeneyda iska casishay shaqadii Facebook ee kashiftay Sirta Shirkadda iyo Arrimo u qarsoonaa
Next articleAlshabaab oo fagaare ku Toogatay Sixiroole iyo Askari ka tirsanaa Maamulka Jubbaland